I-23 ibulewe, i-79 yalimala eMexico City uloliwe ugqithisa ukuwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » I-23 ibulewe, i-79 yalimala eMexico City uloliwe ugqithisa ukuwa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iimoto zoololiwe zazixhonywe ngaphezulu kwenkxaso edilikileyo, njengoko amaqela ohlangulo ayezama ukukhupha nabaphi na abakhweli ekunokwenzeka ukuba babekhwele
Indawo yokudlula eyayiphethe uloliwe we-metro yawa kwindlela exakekileyo
Icandelo lokuwela ngaphezulu lawa ngesiquphe kwindlela egcwele izithuthi
Umzila ophakanyisiweyo uwile xa isithuthi sabetha enye yeentsika zenkxaso kwinqanaba lesitalato
Icandelo lokuwela ngaphezulu elalithwele uloliwe we-metro liwile kwindlela exakekileyo kwilali esemazantsi eMexico City phezolo, kwasweleka abantu abangama-23 kwalimala abayi-79 ubuncinci.
Ividiyo emfutshane ye-CCTV epapashwe ngumzila we-Milenio TV ibonisa icandelo lokudlula ngequbuliso ukuwa kwindlela egcwele izithuthi.
Iifoto ezivela kwisiza zibonisa iimoto zikaloliwe ezijinga ngaphezulu kwezixhaso zidilikileyo, njengoko amaqela ohlangulo azama ukukhupha nabaphi na abakhweli abanokuba bebekhwele.
Zimalunga namashumi amabini ii-ambulensi ebezimase lo mboniso
USodolophu weSixeko saseMexico, uClaudia Sheinbaum uthe abanye babantwana babephakathi kwabo babulawa. Iarhente yokhuselo loluntu yeso sixeko inike ingxelo yokuba inani labantu abaswelekileyo lifikelele kwi-23, ngabantu abamalunga ne-79 abonzakele kule ntlekele.
Iingxelo zokuqala zathi uloliwe ophakamileyo wawa xa isithuthi sabetha enye yeentsika ezixhasa inqanaba lesitalato. Uloliwe waqhekeka kubini njengoko wehla waya ezantsi.
Umgca we-12 ngowona mgca mtsha weMetro City City, owasungulwa ngo-2012. Uhamba kumzantsi-ntshona-ntshona kwikomkhulu laseMexico, elinabantu abaqikelelwa kwizigidi ezili-9.2.
Kuxeliwe, abahlali bavakalise uloyiko malunga nokhuseleko lolwakhiwo kwiminyaka emine eyadlulayo, xa iintsika ezikumgca we-12 zonakaliswa yinyikima. Amagosa ezothutho athi ngo-2017 bakhawuleza balungisa i-overpass emva kokubona iintanda kunye nomnye umonakalo.